IiMoto zeZithuthi zeMoto zeToyota (SUVs)
Ingqwalaselo yeToyota SUV Family
IToyota ine-line epheleleyo ye-SUVs, ukusuka kwi-compact ukuya kwi-SUV ezinkulu. Ngamnye unempawu ezikhethekileyo, ubuchule kunye neempawu zoyilo. Olu luhlu luboniswa ngenye indlela yeendlela ezikhethiweyo zeToyota SUV.
Incinci yeToyota SUVs, i-RAV4 iyimoto engqungquthelayo, i-SUV kunye neentsika zemoto. I-RAV4 yaqaliswa okokuqala eJapan ngo-1994 kwaye yenze indlela eya e-US ngo-1996. Isizukulwana sokuqala i-RAV4 sasiyifumaneka njengendlu emine okanye eminyango ngo-1999; emva koko yaba yintambo engama-4 kuphela (i-soft-top-top door inokufumaneka ngokufutshane ngo-1998 no-1999).
I-RAV4 yesizukulwana sesibini yafika ngo-2001, ilandelwa isizukulwana sesithathu ngo-2006 kunye nesine-gen ngo-2013. Ngo-2016, i-RAV4 yayifumaneka nge-2.4-litre 176-hp / 172 lb.-ft. Injini ye-cylinder inomgca we-cylinder iqhutywe kwi-6-speed speed transmission kunye ne-wheel-wheel drive okanye i-wheel-wheel drive, okanye i-194-hp hybrid gas / electric powertrain ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo (CVT) kunye ne-wheel drive. Uqikelelo lwe-EPA luvela kwi-24 yedolophu / 31 yendlela ehamba phambili yevili-front-wheel drive ezine-cylinder ukuya kwi-22 yendlela / umgwaqo ongama-29 we-wheel drive ezine ukuya kwinqanaba eli-34 le-31 / i-31 ye-hybrid.
Enye imoto esekelwe emotweni, i-Highlander i-Toyota SUV ephakathi kwe-Toyota. I-Highlander yaziswa njengomzekelo we-2001. Isizukulwana sesibini se-Highlander siphume ngo-2008, kwaye isizukulwana sesithathu sesizukulwana sase-Highlander saqala ngo-2014. I-Highlander ye-2016 yayifumaneka ngeenjini ezintathu: i-2.7-litre inline ezine-cylinder ezivelisa i-185-hp ne-184 lb.-ft .
le torque; i-Vitha ye-3.5 ilungileyo ye-270-hp ne-248 lb.-ft. le torque; okanye igesi-ugesi-ugesi owenza i-280 inethiwekhi yamahashe. Ukuhamba kwevili eli-4 okanye i-front-wheel drive, kunye nokuthunyelwa ngokuzenzekelayo (i-speed-6 ye-petroli kuphela, i-CVT ye-hybrid). Uqoqosho lwe-Fuel lusuka kwi-18 yedolophu / 24 yendlela ehamba phambili ye-4WD i-V6 ukuya kwi-20 yesixeko / umgwaqo omkhulu we-FWD ​​ezine-cylinder ukuya kwi-33/28 ehamba ngomgwaqo / 30 edibeneyo kwi-FWD hybrid.
Funda ukuhlaziywa kweToyota Highlander ka-2014 okanye u tyelele igalari ye-Toyota Highlander ye-2014.
I-4Runner inokuyenza yonke into - endleleni okanye kwindlela-ndlela, ukusuka kwintengiso ukuya kwiintaba, kwisizukulwana sayo sesihlanu (ukususela ngo-2010), i-4Runner yi-SUV yeToyota-based-medium-sized SUV. Isizukulwana sokuqala se-4Runner saqalwa ngo-1995, silandelwe isizukulwana sesibini ngo-1989; Isizukulwana sesithathu 4Runner saqala ngo-1995, kwaye isizukulwana sesine saqala ngo-2003. Sifumaneka nge-4.0-litre 270-hp / 278 lb.-ft. I-injini ye-V6, i-wheel-wheel drive okanye i-wheel-4 drive kunye ne-speed-five transmission (V6) okanye isantya esinezantya ezine (i4). Uqikelelo lwezoqoqosho lwe-Fuel yi-17 yedolophu / 22 umgwaqo omkhulu we-2WD i-V6 kunye ne-17 yedolophu / 21 umgwaqo we-4WD. Funda ukuhlaziywa kwe-Toyota Toyota 4Runner TRD Pro.
I-Toyota Sequoia yiToyota SUV epheleleyo ehlala izihlalo ezisibhozo. Isizukulwana sokuqala seSequoia saqalwa ngo-2001, kwaye isizukulwana sesibini safika ngo-2008. Ukubuya ngo-2016 ngokungaguqukiyo, i-Sequoia iyatholakala ngekhethi enye, 5.7-litre 381-hp / 381 lb.-ft. I-FORCE V8 kunye ne-6-speed speed transmission, kunye ne-back wheel-wheel okanye ezine-wheel drive. Uqikelelo lwezoqoqosho lwe-Fuel kwi-4WD yi-13 idolophu / 17; ngokuba i-2WD ibe 13 idolophu / 17.
Kwi-top ye-Toyota ye-SUV ukulungelelaniswa kwiminyaka engama-60 edlulileyo, i-Land Cruiser inamandla kakhulu, isithuthi esinobuchule. Eyokuqala eyakhiwe ngo-1950 kwaye ibizwa ngokuthi "Land Cruiser" ngo-1954, isizukulwana sesibini (FJ60) i-Land Cruiser safika ngo-1980, silandelwa kwisizukulwana sesithathu (FJ80) ngo-1991; isizukulwana sesine ngo-1995; isizukulwana sesihlanu ngo-1998; isizukulwana sesithandathu ngo-2003; kunye nesizukulwana sesikhombisa ngo-2008. Umzekelo we-2016 waqhubeka nesizukulwana sesikhombisa sale moto. Itholakala kwinqanaba elilodwa lokulinganisa nge-5.7-litre V8 ethumela 381 hp kunye no-401 lb.-ft. i-torque ngokusebenzisa ukuhamba kwe-othomathiki yokuhamba ngokuzenzekelayo kunye nexesha elizeleyo lokuhamba ngevili. I-EPA ilinganisela ukuba i-Land Cruiser iya kufikelela kwi-13 mpg yendlela / umzila we-18 mpg.
I-Toyota FJ Cruiser kunye neToyota Venza ziimodeli ezimbini zeToyota eziye zacinywa.
Iingcaphuno ezivela kwi-African Women Women
INguqulelo yaseMelika: uLieutenant General John Burgoyne